Yechitatu beta vhezheni yeHaiku R1 yakatoburitswa | Linux Vakapindwa muropa
Vagadziri veHaiku OS vanofara kuzivisa kuburitswa kweiyo tyechitatu beta vhezheni yeHaiku R1 inoshanda system, iyo inouya mushure megore rekuvandudza uye mukati yeshanduko dzinonyanya kuzivikanwa iyo vhezheni itsva inosimbisa iyo kugadzirisa kune iyo yekuisa maitiro, zvakare kubva pawebhusaiti, iyo vatongi uye nezvimwe.
Kune avo vasina kujaira chirongwa ichi, vanofanirwa kuziva izvozvo yakatanga kugadzirwa mukuita kwekuvharwa kweBeOS uye yakagadziridzwa pasi pezita rekuti OpenBeOS, asi zita rakashandurwa muna2004 nekuda kwezvikumbiro zvine chekuita nekushandiswa kweiyo BeOS trademark muzita.
Haiku OS inotarisa pamakomputa ako, inoshandisa kernel yayo, yakavakirwa pahwaro hweyakavakirwa modular, yakagadzirirwa kukwikwidza kwakanyanya kuzviito zvevashandisi uye kuitiswa kwakanaka kwekushandisa kwakawanda.
kunze kwaizvozvo inosuma chinhu chakatenderedzwa API kune vanogadzira uye inoshandisa iyo OpenBFS faira sisitimu iyo inotsigira yakawedzera faira hunhu, jenareta, 64-bit zvinongedzo, rutsigiro rwekuchengetera meta tag (yefaira rega rega, unogona chengetedza hunhu mune fomu kiyi = kukosha, izvo zvinoita kuti marongero emafaira aite senge dhatabhesi) uye akakosha marexes kuti akurumidze kusarudza pavari.
Iyo "B + muti" miti inoshandiswa kuronga dhairekitori chimiro. Kubva pane iyo BeOS kodhi, Haiku inosanganisira iyo Tracker faira maneja uye iyo Deskbar, ayo masosi akavhurwa mushure meBOS yakasiya nzvimbo.
1 Nhau huru dzeHaiku R1 Beta 3
Nhau huru dzeHaiku R1 Beta 3
Mune ino yechitatu beta vhezheni iyo inoratidzwa yeiyo sisitimu yeshanduko dzakanyanya kukosha dzinomira tinogona kuwana kuti webhu browser WebPositive, yakagadzirwa neprojekti, yakaendeswa kunoshandisa injini yeWebKit 612.1.21 iyo kugadzikana uye kuenderana nemamwe mabhurawuza kwave kunatsiridzwa.
Imwe shanduko inounzwa mushanduro iyi nyowani ndeyekuti maitiro ekumisikidza akagadziridzwaSezvo izvozvi diski yekuparadzanisa interface yakareruka uye iyo yekumisikidza yekugadzirisa interface yakagadziridzwa.
Izvo zvakare zvakasimbiswa izvo rutsigiro rwe Hardware rwakawedzerwasevatyairi vemidziyo isina waya ave akaendeswa kubva FreeBSD 13Pamusoro pekuwedzera kwevatyairi vatsva vemakadhi ane mutsindo, masisitimu ekuchengetedza uye nemidziyo yeUSB, kuenderana neUS3 uye pamusoro pese mashandiro akagadziridzwa. yakagadziridzwa pane masisitimu ane makadhi emifananidzo eNVIDIA (GeForce 6200-GeForce Go 6400).
Kune rimwe divi, pane iyo grafiti server, app_server, ndangariro manejimendi yakagadzirwazve uye mamwe mabasa akaomesesa ekupa akawedzerwa (anoshandiswa mubrowser kupa canvas element).
Izvo zvinotaurwa zvakare kuti iyo yekupedzisira emulator ine rutsigiro rwekutiza kuteedzana kuratidza akadzokorora mavara uye iyo POSIX kuenderana kwagadziriswa.
Iko kugona kutangazve kurodha pasi matsva akavhiringidzwa nekuda kwekukundikana kwenetiweki kwaitwa.
Yakagadziridzwa rutsigiro rwemavara erima madingindira.
Iko kugona kudzima kwekubata pani yakawedzerwa kune yekuisa system maseturu.
Yakagadziridzwa rutsigiro rweXFS neNFS faira masisitimu.
Tsigiro yeSun VTOC yekuparadzanisa matafura yakawedzerwa.
Yakapihwa scroll bar kuyera zvichienderana nesaizi font.
Yakagadziridzwa localization rutsigiro.
Yakavandudza kugadzikana kweMediaPlayer. Wakawedzera rutsigiro rwe4K vhidhiyo.
Iyo pasuru maneja inopa rutsigiro rwekumhanyisa controller zvinyorwa panguva yekubvisa package.
Yakavandudzwa vhezheni ezvirongwa. Python 2 yakadzikiswa uye yakatsiviwa ne Python 3.7.
Finalmente kana iwe uchifarira kuziva zvakawanda nezvazvo kana mukuwana iwo mufananidzo weiyi vhezheni nyowani, unogona kuzviita nekuenda ku kune inotevera chinongedzo.
Kune avo vanofarira iyi yechitatu beta, iwe unofanirwa kuziva kuti akati wandei bhutsu mhenyu mifananidzo (x86, x86-64) akagadzirirwa kuongorora iyo nyowani vhezheni uye yaunogona kuwana kubva chinotevera chinongedzo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Yechitatu beta vhezheni yeHaiku R1 yakatoburitswa